ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာ ဘာလဲ ??? – Trend.com.mm
ကိုယ်တကယ်လိုချင်တာ ဘာလဲ ???
Posted on September 10, 2019 September 10, 2019 by Noel
သင်တကယ်လိုချင်တာကရော ဘာများလဲ?ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘ၀လေးပိုင်ဆိုင်ဖို့လား၊အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လား။ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးထွက်ချင်တာလား။သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲအေးအေးဆေးဆေး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းချင်တာလား စသဖြင့်
ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုက လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုယ်လိုချင်တာနောက်ကိုမလိုက်ပဲ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ကိုအားကျတဲ့စိတ်နဲ့ အဲ့ဒီလူရဲ့ဘ၀အတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ပုံဖော်နေမိတတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကိုယ်သူတို့ကတော့ အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်ပေါ့။
ဥပမာ စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်အောင်မြင်နေတာကိုအားကျပြီး ကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။အလုပ်တွေလုပ်တယ်။ကြိုးစားတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါက ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ရဲ့လား?ကိုယ့်စိတ်ကို သေချာပြန်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲသိဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်က စီးပွားရေးကိုဝါသနာပါတာမဟုတ်ပဲ ကြိုးစားနေရင် အောင်မြင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှု၊စိတ်ဆန္ဒနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။သူများအောင်မြင်တိုင်း ကိုယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာ တပ်အပ်မသေချာပါဘူး။
တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအားကျပြီး ကိုယ်လိုက်ကြိုးစားတာမျိုးဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငါလည်းသူ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေးနဲ့ကြိုးစားတာထက် ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီး ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။
ဘ၀ကိုမျှော်လင့်ချက်အမှားတွေနဲ့ မရှင်သန်ပါနဲ့။သူများတွေရဲ့အလုပ်၊သူများတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေအတိုင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို မရှင်သန်ပါနဲ့။ကိုယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်ပါ။အရာရာကို ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်၊ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ကိုယ့်အတွေးအတိုင်းပဲလုပ်ပါ။
သူများတွေက သူတို့အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေချိန် သူတို့အိပ်မက်နောက်ကို ကိုယ်က လိုက်နေမိတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုယ့်အိပ်မက်အတိုင်း ဘ၀ကိုရှေ့ဆက်လျှောက်သင့်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Park Ha Na
ဇာတ်ကားသစ်အတွက် အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သူတို့သုံးယောက်
ချစ်သူ သဝန်တိုပြီး ပိုချစ်လာအောင် လုပ်နည်း
ငိုကြွေးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး ၆ ခု
အသက်အပိုင်းအခြားပေါ် မူတည်ပြီး မိန်းမတစ်ယောက်အမှန်အကန် ကြွေ စေတဲ့ နည်းလမ်းများ
ခေါက်ဆွဲ ကြိတ်သားလုံးကြော် ပြုလုပ်နည်း
ဆော်ကြည်ဘဲ ဖြစ်အောင် လုပ်နည်း